कांग्रेस महाधिवेशनः खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा शशांकको अग्रता, कसको कति मत ? - ramechhapkhabar.com
कांग्रेस महाधिवेशनः खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा शशांकको अग्रता, कसको कति मत ?
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी मतदानमा शशांक कोइरालाले अग्रता लिएका छन्। अहिलेसम्म १६५ मत गन्दा उनले ५९ मत पाएका छन्।
यस्तै अर्जुन नरसिंह केसीले ४८, रमेश लेखकले ४३, उदय शमशेर राणाले ४१, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ४२, अजय बाबु सिवाकोटीले ३२ र एनपी साउँदले ४६ मत पाएका छन्। यस्तै जितजंग बस्नेत र दिलेन्द्र बडुले समान ३९, नैनसिंह महरले ४१, बालकृष्ण खाँणले ४२, बलबहादुर केसीले ३२ ल्याएका छन्।
खुलातर्फबाट ३५ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्, जसका लागि ९९ जना प्रतिस्पर्धामा छन्।
सभामुखले संसदलाई नौटंकी बनाए : विष्णु पौडेल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाउँदै संसदलाई नौटंकी बनाएको आरोप लगाएका छन् । एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको महाधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले देशलाई बन्धक बनाएर महिनौ देखि अवरुद्ध संसदलाई सञ्चालन गर्न नसकेर नौटंकी बनाएको बताएका हुन् ।
उनले भने – पछिल्लो सयम न्यायपालिका प्रतिको विश्वास जनतामा गुम्दै जानु, कार्यपालिकाले खर्च बजेट कार्यन्वय गर्न नसक्नु अनी सभामुखले संसद सञ्चालन गर्न नसक्नुले नेपाली जनता प्रति सत्तागठबन्धनको विस्वास गुम्दै गएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार भएको समयमा देशको अर्थतन्त्र बचाउने जनताले देख्नेगरी काम भएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने – नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा कठोर रुपमै प्रहार भएपनि देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन जनताले देख्ने गरी काम भएको छ । तर अहिलेको गठबन्धनले समन्वय गर्न समेत नसक्दा अवको निर्वाचनमा जनताले मार्क गरी सकेका छन् ।
आर्थिक इण्डिकेटरहरुलाई बिग्रिन नदिएर देशको उन्नतीमा एमाले सरकारले भूमिका खेलेको उल्ल्ेख गर्दै उनले अहिले राज्यका मुख्य तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका भताभुंग भएको उनले आरोप लगाए ।
सभामुखले दम्भ त्याग नगरेसम्म व्यवस्थापिका चल्न नसक्ने पौडेलको प्रस्टोक्ति थियो । उनले सभामुखलाई तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामा रहन समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।